Ogo iga njem na abawanye na obodo Bursa | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaOgo iga njem na-abawanye na obodo Bursa
Ogo iga njem na-abawanye na obodo Bursa
25 / 03 / 2020 16 Bursa, Akụkọ Asphalt, General, Ụzọ Awara Awara, Mpaghara Marmara, Turkey
Ogo ụgbọ njem na-abawanye n'ime obodo Bursa
Obodo ukwu, nke na-eleba akụrụngwa na njem anya dị ka ihe kacha mkpa na mpaghara niile nke Bursa na enweghị mgbochi na nke a, emechakwala ụzọ a na-ekpo ọkụ asphalt n'okporo ụzọ dị mita 8 na-erute nso na mpaghara Ala ruralam nke Kestel.
Obodo Bursa na-aga n’ihu na-eme ka ụzọ ndị dị n'ime ime obodo mma ahụike na mpaghara 17, n'aka nke ọzọ, iji wepụta ụzọ dị iche iche maka njem, nke bụ isi nsogbu Bursa, iji meziwanye mma na ngwa ngwanrọ dị omimi, ụzọ ndọpụ na ụgbọala njem ọha. N'ime oke ọrụ ndị a, arụchaala ụzọ paịlị a na-agagharị n'okporo ụzọ dị puku puku asatọ na narị atọ, bụ nke jikọtara Alaçam District na nnukwu akwara dị na Kestel. E mere njikọta nke ụzọ agbagoro n'ọhịa ahụ ka esiri nwee ahụ ike karịa n'ọtụtụ ọmụmụ.
Thezọ ndị ahụ na-enwu
Onye isi obodo Bursa nke Obodo Bursa Alinur Aktaş, ya na Kestel Mayor nke Önder Tanır na-eso, mere nyocha n'okporo ụzọ Alaçam ọhụrụ. N'ikwupụta na okporo ụzọ ndị na-ejikọta ime obodo na etiti obodo ahụ dị mma, Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan bụ ntuzi aka Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan. Anyị chọrọ ka ọ gaa n’ihu ndụ ya. N'echiche a, njem na akụrụngwa bụ ihe kacha mkpa maka azụmaahịa a. Ndị agbata obi anyị Alaçam nwere ụdị ọchịchọ ahụ. Anyị arụchaala ọrụ ebe a n'ime usoro ihe omume anyị. Ọ ga-amasịrị m ịdọ ụmụ amaala anyị aka na ntị nke ga-eji ha na gburugburu ubi. Ha kwesịrị ị attentiona ntị na nbata ma ọpụpụ n'ọhịa, ha anaghị ebute mbibi ọ bụla. Anyị emeela ihe dị ka nde 8 nde 300 puku TL na ngụkọta nke puku mita 10 620 a. Achọrọ m ka ụzọ ahụ dị mma nye Alaçam na Kestel. ”
Kestel Mayor Önder Tanır kelere Mayor Aktaş maka ụzọ ahụ na itinye ego ndị ọzọ mere na mpaghara ahụ.
Ọganihu njem na-abawanye na Bursa
Qualitymeziwanye Ogo Transportgbọ njem okporo ụzọ
Ụzọ na-aga n'okporo ámá Bursa
Ntuzi okporo ụzọ na ịrụ ọrụ na Diyarbakir
Ewughari okporo ụzọ na Eskişehir
Emeziwanye ụgbọala nke Samsunda
Ije Ozi Ogologo nke Kayseri Transport Inc.
Ogologo Ụgbọ njem TransportationPark
Ndị njem si Kayseri ga-egbochi ụgbọ okporo ígwè
Nkwupụta Transporteşme Ulusoy Port nke Mịnịstrị nke Transportgbọ njem na akụrụngwa